Maalinta: Sebtember 12, 2017
Basaska cusub ee loo yaqaan '65' oo ay iibsadeen dowladda hoose ee Metroanlıurfa ayaa waxaa loo soo bandhigay dadweynaha xaflad. Isaga oo ka hadlaya xafladda, Duqa Magaalada Nihat Çiftçi wuxuu yiri, uz Waxaan xallinaynaa dhibaatooyinka gaadiidka. Sanliurfa walaalo waxay u adeegaan [More ...]
Wakhtiga kama dambaysta ah ee habka fiisada fiisada ee Muigla 1 Oktoobar!
Taariikhda safarka ee la dhimay (ardayga) ee kaararka safarka elektiroonigga ah ee loo yaqaan '1 October 2017'. Dowlada Hoose ee Magaalada Muğla, Gaadiidka dadweynaha MUTTAŞ iyo gaadiidka dadweynaha ee gaarka loo leeyahay (ÖTTA) ayaa loosoosaaray qiime dhimis shaqsiyeed (arday) [More ...]
Xubinta Guddiga Fulinta ee Sertrans Logistics
Tony Jurkovic, xubin cusub oo ka mid ah Guddiga Fulinta ee Sertrans Logistics, oo bixiya adeegyo saadka lagu qiimeeyo oo lagu bixiyo maareynta silsiladda macaamiisheeda qaranka iyo kuwa caalamiga ah, ayaa noqday mid ka mid ah magacyada halyeeyada waaxda. Xubin Gudiga Fulinta Cusub ee Sertrans Logistics [More ...]
1 by Kocaeli Metropolitan Dawlada Hoose Khadka Akçaray Tram, kaas oo loo adeegsaday Agoosto 2017, ayaa soo jiidatay dareenka dadka degan Kocaeli. Gaadiidka degdega, raaxada leh iyo dhaqaalaha ee Ak ofaray, [More ...]
Gürer oo ka socda CHP: D 2055 guryaha TCDD waxay sugayaan booska CH
MPP Niğde MP iyo gudoomiyaha SOE Fmer Fethi Gürer ayaa ka jawaabey su’aasha Gaadiidka, Wasiirka Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, 6 kun 658 deganaanshaha TCDD 2 bin 55’nin state madhan [More ...]
Siemens si ay u soo saaraan tareenada 45 ee Vienna
Wiener Linien wuxuu iibsanayaa xirmooyin tareenka 45 ah oo laga keenay Siemens. Wiener Linien, oo fuliya inta badan gaadiidka dadweynaha ee Vienna, Austria, wuxuu amar ku bixiyay tareenka 45 inuu u dejiyay shirkadda weyn ee injineerinka Siemens. [More ...]
Agaasimaha Guud ee Gaadiidka TCDD ee Veysi Kurt ee Erzurum
09 Iyadoo ay kaqaybqaadanayaan Veysi Kurt, Maareeyaha Guud ee Gaadiidka TCDD Inc., kulan ayaa lagu qabtay Erzurum bishii Sebtember 2017 iyada oo lala yeeshay shaqaalaha Shirkadda iyo wakiillada NGO-yada. Maareeyaha guud Veysi Kurt [More ...]
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa sheegay in Muwaadiniinta 10 milyan ee doonayay inay qiimeeyaan fasaxa ugu dambeeya ee maalinta 30 ay sabab u tahay Ciidul Adxaa ayaa ku dhacay waddooyinka oo yiri: [More ...]
Mashiinka MTU ee Rolls-Royce ayaa loo isticmaali doonaa mashiinnada dekadaha
Shipyards waa Sanmen la Rolls-Royce, terminal cusub loo isticmaali doono in afar ka mid ah sideed tugboats saxiixay heshiis iyo dedkeeda bixinta matoorada MTU 4000 dalka Turkiga. Heshiiska waxaa sidoo kale ku jira ikhtiyaar ah afar inji. Doomaha wax duqeeya daqiiqad kasta [More ...]